Ogo nke ìhè n 'anya nke 1 m (lx) 160,000LUX (usoro nke iri)
Ìhè Ike 83,000lux-160,000 lux / 83,000-160,000 lux
Egbukepụ nrụpụta (lm / W) 130 / W
Agba okpomọkụ (K) 3500-5000K (4 nzọụkwụ mgbanwe)
Nanchang Light Technology Exlotatin Co, Ltd bụ ntule na ọkụ ọkụ pụrụ iche nke mmepe, mmepụta na ire ahịa. Ngwaahịa ahụ jikọtara ya na ngalaba ahụike ọgwụgwọ, ogbo, ihe nkiri na telivishọn, nkuzi, agba agba, mgbasa ozi, ụgbọelu, omekome nyocha na mmepụta ihe mmepụta ihe, wdg.
Companylọ ọrụ a nwere ndị otu ndị ọrụ tozuru etozu. Anyị na-elekwasị anya na ọrụ echiche nke ihe dị mkpa, ọkachamara. na ọrụ. Na addtin, echiche anyị bụ ime ka ndị ahịa nwee afọ ojuju, nke a na-ewere dị ka ihe ndabere maka nlanarị. Anyị raara onwe anyị nye maka mmepe nke ụlọ ọrụ anyị na ọrụ ọrụ ọkụ. Banyere ngwaahịa, anyị na-enye oke mma nkwa ndị ahịa anyị nwere ogo ekwe nkwa iru anyị ụkpụrụ nke ndị ahịa gbakwasara na àgwà mbụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ekele maka nke anyị ndị ahịa ọhụụ na ndị tụkwasịrị obi na ngwaahịa anyị. Anyị ga-emeziwanye ngwaahịa anyị dị adị na ọrụ, ma weghara usoro ọhụụ nke mmepe teknụzụ na ndabere a. Anyị ga-etinye ihe ọhụrụ gburugburu nke oru itunanya maka inovation iji nye mma ngwaahịa na technicl ọrụ nye ndị ọrụ anyị.
Na ihu nke narị afọ ọhụrụ, Nanchang Light Technology ga-enwe ọtụtụ ohere na nsogbu na ukwuu pssin ọzọ anụ ijeụkwụ, ọzọ senstive ahịa isi na ndị ọzọ poessonal njikwa iji hụ na ọnọdụ anyị dị mkpa n'ọhịa nke teknụzụ ngwa anya.
Nke gara aga: Medical Optical Endoscope Endoscopic ikanam Cold Light isi iyi
Osote: Infrared ọgwụgwọ ìhè Agwọ Ngwaọrụ ọgwụgwọ anụ ahụ ahụ na-elekọta ahụ ọkụ
shadowless ada ịwa ahụ ìhè
ịwa ahụ n'uko ìhè
ịwa igwefoto ịwa ahụ
ịwa ahụ loupe
ịwa ahụ ọrụ oriọna
N'ogbe ngosiputa Operating Room Medical ikanam Li ...
N'uko ụdị otu isi shadowless oriọna
Surgery ada eze ịwa ụlọ ọkụ nkụkpọ ...
High Quality ikanam Shadowless Dugara ịwa ahụ Medica ...
Ọkụ na-enweghị ọkụ maka ime ụlọ
Medical ịwa ahụ udomo oro Light Mobile Shadowless L ...
Ikanam ịwa ahụ Headlight, Eze oriọna, mgbidi ugwu ule ìhè, Halogen Oriọna Maka Biochemical Analyzer, Ọmụma Ule Ọgwụ, Halogen Examination Oriọna,